दोस्रो तहका नेतालाई डा. भट्टराईको प्रश्न : ओली सुध्रन्छन् र गोरू ब्याउँछ भनेर आश गर्नु उस्तै हैन र, खै चेत ? - Baikalpikkhabar
दोस्रो तहका नेतालाई डा. भट्टराईको प्रश्न : ओली सुध्रन्छन् र गोरू ब्याउँछ भनेर आश गर्नु उस्तै हैन र, खै चेत ?
काठमाडौँ / जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुलाई लक्षित गर्दै उनीहरु दूरदृष्टि र कुनै विचार नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
माधव नेपालको साथ छाडेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग लागेक स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई संकेत गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
नेता भट्टराइले उनीहरुमा ७० आसपासका बुढा (नेता)हरूको जति पनि सत्य र न्यायको परख, दूरदृष्टि तथा विद्रोही चेत/आँट नभएको टिप्पणी गरेका हुन्।
भट्टराईले ओली सुध्रन्छन् र गोरु ब्याउँछ भनेर आश गर्नु उस्तै उस्तै भएको पनि टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,’हामी ७० आसपासका बुढाहरूको जति पनि सत्य र न्यायको परख र दूरदृष्टि तथा विद्रोही चेत/आँट नभएका दोश्रो पुस्ताका नेताहरूलाई के भन्ने होला खै! बाघ बुढो र स्याल तन्नेरी भन्दा चित्त दुख्ला! ओली सुध्रन्छन् र गोरू ब्याउँछ भनेर आश गर्नु उस्तै उस्तै हैन र? चुनावचिन्ह नै पार्टी हो र? खै चेत?’
बुधबार, ०९ भदौ, २०७८, बिहानको ०८:५९ बजे